यो समय र मितिमा जन्मेका मानिसहरु जीवनकालमा अर्बपति हुने संकेत - E ALL NEPAL
यो समय र मितिमा जन्मेका मानिसहरु जीवनकालमा अर्बपति हुने संकेत
न्यूमरोलोजी (अंकज्योतिष) मा केही मितिमा जन्मेका मानिसहरु सफल ब्यापारी मानिन्छन् । न्यूमरोलोजीका अनुसार १ अंकका कारोबारीहरु व्यवसायलाई आफ्नो बलबुँतामा अगाडि बढाउने क्षमता राख्छन् । उनीहरुलाई कारोबारको हिसाबले राम्रो लिडर मानिन्छ । आउनुहोस् कुन नम्बरका कारोबारी सफल काराबारी बन्छन् ।
नम्बर १: के हो नम्बर १ ? जसको जन्म मितिको अंक जम्मा गरेर १ हुन्छ, न्यूमरोलोजीका अनुसार त्यसलाई १ नम्बर भनिन्छ । अर्थात्, जसको जन्ममिति १, १०, १९ र २८ हुन्छ, त्यसलाई १ नम्बर भनिन्छ । न्यूमरोलोजिस्ट संजय बी जुमानीले १ नम्बरको क्यारेक्टर निकै बलियो हुने बताएका छन् । उनीहरु जन्मजात लिडर हुन्छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन र नेतृत्व क्षमता निकै राम्रो मानिन्छ । उनीहरु आफ्नो जीवनमा सफलताका लागि नयाँ उद्देश्य बनाउँछन् । यस्ता व्यक्तिलाई अरुको नेतृत्वमा बस्न मन पर्दैन । उनीहरुको लक्ष्य सधैं ठूलो हुन्छ।
यी हुन् नम्बर १ भएका कारोबारीः
न्यूमरोलोजीमा नम्बर १ भएका व्यक्तिहरुको विशेषता यो हुन्छ कि उनीहरु आफ्नो नेतृत्वशैली र व्यवस्थापन क्षमताका लागि देश विदेशमा चिनिन्छन् । नम्बर १ भएका कारोबारीको सूचीमा मुकेश अम्बानी र नीता अम्बानी, बिल गेट्स, रतन टाटा, धिरुभाइ अम्बानी आदि समावेश छन् ।
माइक्रोसफ्टका सह-संस्थापक बिल गेट्सको जन्म सन् १९५५ अक्टोबर २८ तारिखमा भएको हो । आफ्नो नेतृत्व क्षमताका कारण नै उनी संसासका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्।
मुकेश अम्बानी र नीता अम्बानीः
मुकेश अम्बानीको जन्मदिन १९ अप्रिल हो । यस हिसाबले न्यूमरोलोजीमा उनको अंक १ हो । निता अम्बानीको जन्म १ नोभेम्बर सन् १९६३ को हो । आफ्नो जन्ममितिको हिसाबले उनी पनि १ नम्बरमा छिन् । निता अम्बानीले पनि कारोबारमा हात बढाइन् र उनी यसमा पनि सफल भइन् । यी दुबै भारतका सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्तिमा गनिन्छन् ।
रतन टाटाको जन्म सन् १९३७ को डिसेम्बर २८ तारिखमा भएको थियो र उनी पनि आफ्नो जन्ममितिको हिसाबले नम्बर १ मा छन् । रतन टाटाले आफ्नो नेतृत्व शैलीका हिसाबले ‘टाटा ग्रुप’ लाई ग्लोबल ब्रान्ड बनाएका छन् । उनले टेटली टी, जेगुआरजस्ता ठूला विदेशी ब्रान्ड खरिद गरे ।
धीरुभाइ अम्बानीको जन्म डिसेम्बर २८ सन् १९३२ मा भएको थियो। न्यूमरोलोजीमा उनको पनि अंक १ नै हो । धीरुभाइ अम्बानी कारोबारी जगतमा आफ्नो नेतृत्वशैली र दुरदर्शिताका लागि परिचित थिए । उनी एक कपडा व्यापारीबाट भारतका ठूला बिजनेस टाइकुन बनेका थिए । उनले सन् १९५८ मा १५ हजार भारुको लगानीसहित रिलायन्स कमर्सियल कर्पोरेशनको सुरुवात गरेका थिए।
जीवनभरमा अशुभ एव् अभावबाट पन्छिन चाहानुहुन्छ भने यी काम जीवनमा कहिल्यै नगरेकै राम्रो
के यो पृथ्वीमा महिलाको मात्र आँशु बिक्नु पर्छ हो? #IamWith_Rabi Lamichhane✊️